Mpampianatra: Sao ampihesonin'olona eo fotsiny e
lundi, 09 juillet 2018 12:21
Sary LFR 2018
Adikako eto ambany ny teti-bola tsy nasiam-panitsiana tapaka tao amin'ny Antenimieram-pirenena izay nandraisan'ny député 73 anjara ihany koa.
Raha fintinina dia tsy misy sorabola ho fampakarana ny karama, na fampidirana mpiasa, na fampakarana indemnité mpampianatra velively ao, ka vola aiza izany, ary ahoana no amoahana vola tsy voasoratra anaty teti-bola?
 FANDANIANA HO AN’NY MPIASAM-PANJAKANA
Ny fiakaran’ny fandanina ara-karama ho 76,3 lavitrisa ariary ao anatin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fitatanam-bolam-panjakana nasiam-panitsiana taona 2018 dia voamarina amin’ireto manaraka ireto:
- Fiakarana 8% ny karaman’ny mpiasam-panjakana rehetra manomboka ny volana May 2018;
- Fampifanarahana ny fandoavana ireo fisondrotana girady;
- Sorabola fanampiny ho an’ny mpiasa ivelany.
 FANDANIANA HO AN’NY FAMPANDEHANAN-DRAHARAHA
Tsy hisy fiovana eo amin’ny fandaniana ho an’ny Entana sy Raharaha, na izany aza, ireo Famindram-bola sy Fanampiana ara-bola dia hiakatra tokoa eo amin’ny 16.3%. Io fiovàna io dia ho noho ny vola fanampiny 100.0 miliara Ariary omena ny JIRAMA, izay lasa ho 309 miliara Ariary raha 209 miliara Ariary no noheverina tany am-boalohan’ny taona. Ny tanjona amin’izany dia ny hampitombo ny hery enti-manohitra ny fiakaram-bidy eo amin’ny akora ampiasain’ny JIRAMA, ary indrindra ho fanalefahana ny vidin’ny Herin’aratra, amin’ny endriny somary ankolaka.
(Sary LFR 2018 - ampio miliara Ariary aorian'ny sorabola voasoratra eo amin'ny tabilao)
- Ny colonne voalohany dia ny teti-bola tamin'ny 2017;
- Ny colonne faharoa, izay mizara roa, dia ny ilany havia na LFI dia Loi de Finances Initiales, izany hoe ilay teti-bola nolaniana tany amboalohany, nolanin'ny député tsy nisy fanitsiana tamin'ny oktobra 2017, ary ny havanana dia ny LFR na loi de finances rectificative, izay fanao isan-taona io manitsy ilay LFI ny volana mey ny taona diavina, izany hoe vao nolanian'ireo député, izay tao anatiny nandany izany ireo ni grevy teny amin'ny 13 mey.
- Ny colonne fahatelo dia ny elanelana niakatra na nidina vokatry ny fanitsiana.
- Ny colonne farany dia ny isan-jaton'ny fiakarana na ny fidinanan'ny teti-bola.
Eto dia mazava fa 0% ny fiakarana na fidinan'ny vola tambin-karama fampandehanan-draharaha.